Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Seychelles » Ny laboratoara fanandramana COVID-24 vaovao 7/19 ao Seychelles dia manome safidy maro ho an'ny mpandeha
Lab fitiliana COVID-24 vaovao 7/19 ao Seychelles
Seychelles Medical Services Pty, orinasam-pitsaboana vaovao voasoratra anarana ao Seychelles dia manokatra ny laboratoara fanandramana COVID-19 natokana ho an'i Seychelles.
Tanjona vaovao mikendry ny hanome serivisy fitiliana mety sy tsy misy tohika indrindra ho an'ireo mpizahatany alohan'ny hanidinana any ivelany.
Ny laboratoara vaovao dia afaka manodina fitsapana mihoatra ny 30,000 isan'andro ary ny fitsapana dia afaka manara-maso ireo fototarazo fantatra rehetra sy ireo karazana COVID-19.
Amin'ny faran'ny volana Mey 2021, Seychelles Medical Services Pty dia manantena ny hanokatra sampana dimy santionany amin'ny Mahé, Praslin ary La Digue.
Ny fotodrafitrasa tsy miankina no faharoa ao Seychelles manome serivisy fitiliana PCV COVID-19 PCR ankoatra ny Euro Medical Family Clinic izay nanomboka ny serivisin'izy ireo volana vitsivitsy lasa izay, na dia manana fahaiza-manao lehibe kokoa aza ity toerana iray ity.
Ny tanjona dia ny hanomezana serivisy fitiliana mety sy tsy misy tohika indrindra ho an'ireo mpizahatany alohan'ny hanidinana any ivelany. Hatolotra amin'ny tsena eo an-toerana ihany koa ireo serivisy ireo ho an'izay mila fanamarinana momba ny dia iraisam-pirenena ho an'ny dia.
Ny ivon-toerana voalohany nisokatra tamin'ny anaran'ny varotra dia hita ao amin'ny Nosy Edena ao amin'ny "The Blue Building" (eo akaikin'ny Restaurant Bravo). Amin'ny faran'ny volana Mey 2021, Seychelles Medical Services Pty dia manantena ny hanokatra sampana dimy santionany amin'ny Mahé, Praslin ary La Digue. Ny foibe rehetra dia hiasa 24/7.